Sida gabay loo qoro: talooyin aasaasi ah iyo tabaha si loo helo | Suugaanta Hadda
Sida gabay loo qoro
Encarni Arcoya | 09/09/2021 17:00 | Gabay
Qorista maansadu ma sahlana. Waxaa jira kuwa u fududaaday, iyo kuwa u arka inay aad uga dhib badan yihiin inay kaamil noqdaan. Laakiin haddii aad rabto inaad barato sida gabay loo qoro, waxaa jira talooyin gaar ah oo aan ku siin karno kuwaas oo kaa caawin doona inaad hubiso inaysan dhibaato ahayn.
Ma rabtaa inaad ogaato maxay yihiin furayaasha maansada qorista? Sida loo qoro gabay jacayl, nostalgia ama khiyaali ah? Markaa ha ka waaban, hoosta waxaan ku tusi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
1 Gabay gabay, maxaad taqaan intaadan samayn?
1.1 Waxyaabaha kale ee la tixgeliyo
2 Talooyin ku saabsan qorista gabayga
2.1 Ogow waxaad gabayga ka qori doonto
2.2 Barashada luqadda suugaanta
2.3 Si cad u sheeg farriinta iyo ujeeddada aad raadinayso
2.4 Isticmaal sarbeebaha haddii aad u baahan tahay
2.5 Xakamee dhammaan dhinacyada maansada
2.6 Ka taxaddar calaamadaha xarakaynta
2.7 Markaad dhammayso, gabayga tiri
2.8 Maansada baro
Gabay gabay, maxaad taqaan intaadan samayn?
Kahor intaadan naftaada u bilaabin inaad gabay qorto, waxaa jira fikrado aasaasi ah oo aadan ka tagi karin, maxaa yeelay wax walba waa nuxurka maansada. Mid ka mid ah fikradahaas ayaa la xiriira walxaha maansada. Ma taqaan waxa laga sameeyay?
ka maansadu waxay ka kooban tahay saddex qodob muhiim ah:
Tix, oo ah sadar kasta oo maansadu leedahay.
Halbeeg, oo dhab ahaantii ah aayado taxane ah oo hal mar la akhriyi karo oo u ekaan kara baaragaraaf.
Laxanka, oo ah waxa ay aayaduhu isku beegmaan. Hadda, laxanka dhexdiisa waxaad ka heli kartaa is -barbardhig, marka shaqallada oo kaliya ay isku beegmaan; shibbane, marka shaqallada iyo shibbanayaashu isku beegmaan; iyo aayad xor ah, marka aadan ku luuqaynin aayad kasta (kani waa kan ugu dambeeya). Tusaale ahaan waxay noqon kartaa "In kasta oo daayeerku ku labisto xariir / qurux joogitaan". Sidaad arki karto, dhammaadka aayaddu waxay ku beegan tahay mid walba, waxaana taas loo yaqaannaa shibbane shibbane ah. Dhinaca kale, haddii aan nidhaahno «Goor saq dhexe ah / oo Ilmihii ilmeeyey, / boqolkii bahal ayaa toosay / xoolkiina wuu noolaa ... / wayna soo dhowaadeen / waxayna u fidiyeen Ilmaha / boqolkooda qoorta , u hiloobay / sida duud ruxay. Haddii aad ogaato, gabaygan Gabriela Mistral (Romance of the stable of Bethlehem) wuxuu ina siinayaa cunug is -bahaysanaya, nool oo ruxaya; sidii ay u baraarugeen oo u soo dhowaadeen. Waxay ku dhammaadaan shaqal, laakiin kuma qorna shibbaneyaal.
Waxyaabaha kale ee la tixgeliyo
Mid kale oo ka mid ah fikradaha aasaasiga ah ee sida loo qoro gabay waa cabbir. Tani waa wadarta dhawaaqyada ku jira aayadda waana mid aad muhiim u ah maxaa yeelay aayad kasta waa inay lahaataa tiro shibbane oo la xiriira erayga ugu dambeeya. Haddii eraygaasi yahay:
Degdeg ah: hal dhawaaq kale.
Llana: iska joog meesha aad joogto.
Esdrújula: hal shibbane waa laga jaray.
Dabcan, markaa waa la siin karaa ruqsadaha maansada sida synalepha, syneresis, hiatus, iwm. taasi waxay beddeli lahayd mitirka tuduc ama maansada oo dhan.
Ugu dambeyntii, waa inaad sidoo kale tixgelisaa qaab -dhismeedka. Taasi waa, sida aayadaha kala duwan ay u noqonayaan laxanka loona dhisi doono. Waa in la sheegaa in ay jiraan dhowr nooc, mid walibana uu dareemi karo raaxo badan mid ama kan kale.
Talooyin ku saabsan qorista gabayga
Markaad wajahayso bogga madhan, waa inaad aad ugu caddahay sida gabay loo qoro, taasina waxay maraysaa kuwan soo socda:
Ogow waxaad gabayga ka qori doonto
Qorista maansada jacaylku lama mid tahay maansada nacaybka. Sidoo kale isku mid ma aha in la qoro maanso macquul ah marka loo eego gabay khiyaali ah, ama mid leh duluc gaar ah. Kahor intaadan naftaada bilaabin, waa inaad ogaataa waxaad rabto inaad wax ka qorto, maxaa yeelay gelinta jumlado qaarkood oo qaafiyad leh iyada oo aan la sii adkaysan karin ayaa qofna sameeyaa, laakiin laxankaas iyo wax u sheegga ayaa durba ka sii dhib badan.
Barashada luqadda suugaanta
Gabaygu ma aha riwaayad aad ku ballaarin karto waxaad rabto, mana aha sheeko gaaban oo aad ku sheegto sheeko leh ereyo kooban. Gabayga waa inaad ereyada laftooda ka dhigtaa kuwo qurxoon, ma aha erayada oo keliya, laakiin sidoo kale laxanka, codka ...
Si cad u sheeg farriinta iyo ujeeddada aad raadinayso
Waxaa muhiim ah, ka sokow ogaanshaha waxa aad ka qorayso, sidoo kale maanka ku hay maxaad rabtaa inaad gudbiso, waa maxay hadafka loo qoray gabaygaas, ama waxa aad rabto in akhristaha uu dareemo marka uu kuu akhrinayo.
Isticmaal sarbeebaha haddii aad u baahan tahay
Sarbeebaha waa a maaddada maansada, waxayna u adeegaan inay qurxiyaan afka. Hadda, ka tag kuwa hore loo yaqaan oo qof walba sameeyo oo abuuro adiga kuu gaar ah. Way fiicantahay inaad ku salaysnaato iyaga, laakiin "luul dharab ah" ama "xakamaynta damacyada" ayaa horeba loo adeegsaday wax badan, sidaa darteed kuma farxi doonaan dhagaystayaashaada.
Xakamee dhammaan dhinacyada maansada
Waxaan si gaar ah uga hadlaynaa laxanka, mitirka, tirada tuducyada, qaab -dhismeedka ... Inta aadan soo degin, go'aanso sida aad rabto maansadu inay noqoto si aad ugu dhegto. Markaa, waxaad siin kartaa xoog badan qayb, ama waxaad u sheegi kartaa waxaad ka rabto gabayga sidii inuu lahaa bilow, dhexe iyo dhammaad.
Ka taxaddar calaamadaha xarakaynta
In aad wax qorayso maanso micnaheedu ma aha in aan la ixtiraamin calaamadaha xarakaynta. In kasta oo ay jiri karto dabacsanaan dheeraad ah, runtu waxay tahay inaad sidoo kale isticmaasho, gaar ahaan inaad siiso hakad u dhexeeya aayadaha iyo stanzas.
Haddii kale waxaad ogaan kartaa in farriintaadu aad u dheer tahay oo akhristaha uusan xitaa xusuusan sida uu ku bilowday, ama uu ku yara hakado neefsashada oo gooyo macnaha guud ee maansada.
Markaad dhammayso, gabayga tiri
Waa habka ugu fudud ee loo sameeyo eeg haddii maansadu dhab ahaantii "leedahay nolol". Waa maxay? Hagaag, waxay ku saabsan tahay ogaanshaha haddii ay tahay cod, haddii ay leedahay laxanka, isku -darka, macnaha iyo haddii ay runtii kaa dhigayso inaad wax kiciso. Haddii markaad akhrido aysan u muuqan nolol ama haysasho, ha niyad jabin oo isku day mar kale.
Waxa muhiimka ah iyo waxa ay tahay inaad isku daydo ayaa ah inaad ku sheegto khadadkaas yar wax kasta oo aad rabto, iyo in eray kastaa xanbaarsan yahay dareen badan taas oo ah waxa ka dhigaya "gabayo" dhan.
Talada ugu dambaysa ee aan ku siinno waa taas daraasee wax kasta oo la xiriira suugaanta maansada. Sida kaliya ee aad uga fiicnaan karto maansooyinkaaga oo aad u noqon karto aqoonyahan mawduuca waa adiga oo wax ka barta. Sidaa darteed, kuma filna oo keliya inaad akhrido gabayada oo aad aragto sida qoraayadii kale ee hore iyo hadda u sameeyeen gabayada, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxay yihiin saldhigyada, taariikhda iyo isbeddellada ay soo martay si aad u ogaato waddadaada.
Hadda ma ku dhiirranaysaa inaad gabay qorto?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Noocyada » Gabay » Sida gabay loo qoro
Goretti Irisarri iyo Jose Gil Romero. Wareysi lala yeeshay qorayaasha La traductora